Sidee dib loogu bilaabayaa ciyaaraha 5 sano kadib? - Horyaalnimada
Blog-ga ciyaaraha caanka ah
Qaanuunka iyo siyaasadaha buskudka
Sidee dib loogu bilaabayaa ciyaaraha 5 sano kadib?
Sidee dib loogu bilaabo ciyaaraha 5 sano ka dib joojinta?
Sidee dib loogu bilaabo ciyaaraha guriga?
Waa maxay ciyaaraha aad dib ugu soo laaban lahayd?
Isboortigee ayaa dooranaya inuu dib u bilaabo dhaqdhaqaaqa jirka?
Waa maxay ciyaaraha marka aanad ciyaaraha ahayn?
Sidee si tartiib tartiib ah ugu soo laaban kartaa ciyaaraha?
Sidee loogu soo noqdaa ciyaaraha si habsami leh?
Sidee dib loogu bilaabo ciyaaraha 45 ka dib?
Sidee dib loogu bilaabo ciyaaraha 20 sano ka dib joojinta?
Waa maxay isboortiga ugu dhameystiran?
Sidee si degdeg ah u qaabaysan?
Sidee dib loogu soo celin karaa xaalad jireed?
Waa maxay isboortiga ugu fiican ee lumiya baruurta caloosha?
Sidee loogu soo noqdaa meesha ugu sareysa jir ahaan?
Dib u bilaabista dhaqdhaqaaqa isboorti waa in uu ahaado mid tartiib tartiib ah: waxaa lagama maarmaan ah in lagu bilaabo dhaqdhaqaaqyo fudud (baaskiil, socodka), qiyaastii 3 saacadood usbuucii, ku harta xoog dhexdhexaad ah (iyada oo aan lahayn neefsasho xad-dhaaf ah) oo lagu kabo tan layliyada fudud. dhisidda jirka, iyada oo aan culeys lahayn.
Ku billow inaad diiriso murqahaaga adigoo soconaya todoba daqiiqo, adoo xoogga saaraya lulaynta gacmaha. -Layliga ugu horeeya waxaa loogu talagalay in lagu wanaajiyo habka neefsiga wadnaha adiga oo ka shaqeynaya neefsashada. Beddel 1 daqiiqo oo socod degdeg ah leh 30 ilbiriqsi oo orod ah. Ku celi layligan 5 jeer.
5-ta isboorti ee ugu sarreeya si ay qaabkooda ugu soo laabtaan
Jimicsi: waa ciyaar kuu ogolaanaysa inaad ka shaqeyso dhismaha murqahaaga. …
Orodka: isboortigani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad hoos u dhigto oo aad lumiso miisaanka. …
Xadhiga boodboodka: qalabkani maaha mid qaali ah.
WAA XIISO BADAN: Su'aashaada: Halkee buu ku yaal fiyuuska sigaarka Golf 6?
Yoga, Pilates, dabaasha iyo socodka sidoo kale waa in la door bidaa”, ayuu kula taliyaa xirfadlaha. Ka fogow saamaynta ciyaaraha oo ha qaadin culaysyo culus. Sida uu qabo dhakhtar Carole Maître, "waxaa fiican in la sugo afar bilood iyo badh ka hor inta aanad ku laaban orodka ka dib dhalmada", tusaale ahaan.
Ciyaarista ciyaaraha adiga oo aan isboorti ahayn, waa suurtagal!
dabaasha Yoga Qoob ka ciyaar Baaskiilka
1/ Samee baaritaan dhakhtarka.
2/ Samee jadwal.
3/ Isku dhafka ciyaaraha iyo raaxada.
4/ Horay u soco.
5/ Xawaare u kac.
6/ Ku biir jimicsiga.
7/ Kala hormarinta joogtaynta marka loo eego xoojinta
8/ Baro inaad dhageysato jirkaaga.
Halkan waxaa ah toban tilmaamood oo ku hagaya.
Is weydii su'aalaha saxda ah ka hor inta aanad bilaabin. …
Iska hubi dhakhtarka. …
Deji yoolal la gaari karo …
Si aad naftaada uga farxiso. …
Dooro meesha saxda ah ee dhaqdhaqaaqaaga ciyaaraha. …
Si fiican u qalabee. ...
Si tartiib tartiib ah u soco. …
Isku soo wada duuboo.
Isboortiga lagu taliyay waa isboorti dulqaad leh oo ka shaqeyn doona nidaamka wadnahaaga oo leh kulamo celcelis ahaan 45 daqiiqo 2 ilaa 3 jeer todobaadkii. Isboortiga adkeysiga, waxaan leenahay orodka, socodka ama dabaasha. Intaa waxaa dheer, waa muhiim inaad si fiican u fuuqbaxdo inta lagu jiro kalfadhiyada.
5 talo oo ku saabsan ku soo laabashada ciyaaraha ka dib muddo dheer oo dhaqdhaqaaq la'aan ah
Qaybta ugu adag waa bilawga. Ugu horreyntii, waa inaad heshaa dhiirigelinta inaad ku soo noqoto ciyaaraha. …
Hel jawi sax ah. ...
Go'aami qaabka tababarka. ...
Si aad talo u weyddiisato. ...
Si loo hagaajiyo ujeedooyinka.
WAA XIISO BADAN: Goorma ayaa Champions League taariikhda dib loo bilaabayaa?
Dabbaasha ayaa loo tixgaliyaa isboortiga ugu dhameystiran waana doorasho aad u fiican jimicsiga sanadka oo dhan.
Daalka: sidee dib ugu soo noqon karaa qaab ahaan?
Xushmee hurdadaada. ...
Hurdo qaado ...
Samee dhaqdhaqaaq jireed oo joogto ah. ...
Hayso cunto dheellitiran, kala duwan oo caafimaad leh. ...
Qaado koorsada kaabista cuntada: magnesium, vitamin C, ginseng, jelly royal, iwm.
Baro inaad teleefanka dhigto
Isboorti noocee ah ayaa lagu tababaraa si aad u yeelato jir riyo leh?
Dhisidda jirka si loo sawiro.
Zumba si loo baabi'iyo curcurada jacaylka.
Aquabiking si loo baabi'iyo cellulite.
Pilates si ay u shaqeeyaan muruqyada qoto dheer.
Saxanka korontada, cadowga koowaad ee baruurta.
U ordaya abs shub ah.
Dayactirka jirka waxaad si fiican u samayn kartaa fadhiyo yaryar oo 15 daqiiqo ah maalin kasta. Haddii aad leedahay ujeedo hammi dheeraad ah, sida ay u kala horreeyaan waxqabadka, korodhka tirada badan ama miisaan dhimista, tababarayaashu waxay ku talinayaan ugu yaraan 3 kulan oo isboorti inta lagu jiro usbuuca inta u dhaxaysa 45 daqiiqo iyo 1 saac.
Si aad u lumiso dufankaaga guud ahaan, gaar ahaan caloosha, samaynta tababarka wadnaha ayaa shaki la'aan ah xalka ugu fiican. Waxaad ku tababaran kartaa qaabab kala duwan: socodka jirdhiska, orodka, boobka, xadhig ka boodka, dabaasha, baaskiil wadida...
Isku day inaad socotid, adoo isticmaalaya mishiinka elliptical, ama dabaasha. Marka aad wax badan ku qabato hawlahan, kordhi xoojinta, inta jeer, ama muddada si aad u sii wadato shaqada jidhkaaga. Haddii aad horeba u jimicsatay, isku day inaad jimicsi badan samayso adigoo dhexdhexaad ah ama aad u sarreeya.
WAA XIISO BADAN: Sidee dib loogu bilaabayaa ciyaaraha 2 bilood ka dib?
Sidee dib loogu bilaabayaa ciyaaraha 2 bilood ka dib?
Sidee dib loogu bilaabo ciyaaraha 1 bil kadib? Tusaale ahaan, haddii aad tahay
Sidee dib loogu bilaabo ciyaaraha ka dib fasax dheer?
Sidee dib loogu bilaabayaa ciyaaraha ka dib muddo dheer oo jimicsi la'aan ah? Halkan waxaa ah toban talooyin
Sidee dib loogu bilaabayaa ciyaaraha 3 bilood ka dib?
Sidee loo sameeyaa soo kabashada ciyaaraha wanaagsan? Wareysi jireed waad awoodaa
Su'aal: Waa maxay sababta ku soo laabashada ciyaaraha ay u adag tahay?
Sidee dib loo bilaabo ciyaaraha? Dib-u-soo-kabashada dhaqdhaqaaqa ciyaaraha waa inay noqotaa mid lama huraan ah
Sidee dib loogu bilaabayaa ciyaaraha bilaha joojinta ka dib?
Sidee dib loogu bilaabo ciyaaraha bil ka dib? Kala duwi jimicsigaaga. Hadii aad
Sidee si tartiib ah mar kale loo bilaabo ciyaaraha?
Sidee dib loogu bilaabi karaa ciyaaraha adiga oo aan waxyeello u geysan naftaada? Samee go'aano wanaagsan iyo
Ku saabsan qoraaga
Magacaygu waa Alan. Ku soo dhawoow bloggeyga ciyaaraha Halkaan waxaad ka heli doontaa akhristuhu wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha, faallooyinka tartanka, wareysiyada ciyaartoyda, ciyaaraha adduunka iyo Yurub. Kubadda cagta, xeegada barafka, kubbadda koleyga iyo horyaalnimada ciyaaraha kale.
Jawaab degdeg ah: Sidee loo xiraa gunti suunka karatee?
Jawaab degdeg ah: Sidee loogu heli karaa Maareeyaha Kubadda Cagta bilaash?
Sidee looga bilaabaa golf?
Goorma ayaa la qaban doonaa isku aadka Champions League?
Sidee lagu heli karaa tusmada Golf-kaaga?
Yaa qaaday naxashka Bruce Lee?
Sidee buu u shaqeeyaa tartanka baaskiilka?
© 2022 Horyaalka
Nala Xiriir | À propos de nous | Qaanuunka iyo siyaasadaha buskudka
KA DIGTOONOW XUQUUQDA HAYSATA! Dhammaan agabka waxaa lagu dhejiyay goobta si adag ujeeddooyin macluumaad iyo waxbarasho ah! Haddii aad aaminsan tahay in wax soo dhejinta ay xad gudub ku tahay xuquuqdaada daabacan, hubi inaad nagula soo xiriirto foomka xiriirka oo alaabtaada waa laga saari doonaa!